भीम रावललाई हराउन कांग्रेस उम्मेदवारलाई भारतीय दुतावासको एक करोड ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
भीम रावललाई हराउन कांग्रेस उम्मेदवारलाई भारतीय दुतावासको एक करोड !
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर वागगठबन्धनसहित चुनावमा गएपछि उसका उम्मेदवारलाई हराउन सबै शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल सुरु भएको छ । प्रभावशाली नेताहरुलाई हराउन भारतीय दुतावासबाट पैसा समेत वितरण भइरहेको स्रोतले दावी गरेको छ । अछाम क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनीधिसभाको उम्मेदवार रहेका एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री भीम रावललाई हराउन भारतीय सहयोगमा रणनीति बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भारत स्वाँरलाई भारतीय दुतावास मार्फत एक करोड सहयोग पुगेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले नै दावी गरे ।
‘अछाममा भीम रावललाई जसरी पनि हराउनु पर्छ भन्नेमा कांग्रेसको ठूलो पक्ति लागेको छ भारतीय सहयोग पनि छ’ नाम नबताउने सर्तमा ती नेताले भने, ‘अहिले करोड करोड आएको हाम्रै भित्र बहस बनेको छ म कांग्रेस हुँ तर मलाई नै यस्तो राजनीतिले दिक्क बनाएको छ ।’ अछाममा एमाले एक्लै हुँदा पनि नेता रावलले जित्ने सम्भावना रहेको वाम गठबन्धन बनेपनि ठूलो मतअन्तर रहेको भन्दै कांग्रेसले पैसाको प्रभावमा पनि मत तान्ने रणनीति बनाएको छ ।
चुनावमा उमेद्वारहरुले अत्याधिक रकम खर्च गर्ने भएपनि आचार संहिता अनुसार त्यसको वास्तविक हिसाब किताब खोज्ने प्रचलन छैन । निर्वाचन आयोगले पनि उमेद्वारले वुझाएको हिसाबलाई नै मान्यता दिने हुदा न्युन खर्च भएको देखिन्छ । तर, वास्तविक रुपमा विजय हुने सम्भावना बोकेका उमेद्वारहरुले करोडौ रुपैया खर्च गर्ने गरेको कुरा स्पष्ट देखिने सर्वसाधारणहरुले समेत बताउदै आएका छन् ।